AVI in Lugood Converter: Sida loo soo dejinta AVI in Lugood Library
Sidaas waa inaad heshaa qabow video clip AVI in aad rabto in aad soo wadada via i-qalab aad, laakiin tan iyo markii aan la iibsaday dukaanka Lugood, is waxaa laga keeno maktabadda Lugood aad galay waxay noqon kartaa wax yar ka xeelad badan. Oo weliba Lugood kaliya taageeraa video in MOV, MP4, iyo M4V. Si lagaaga caawiyo in aad si guul leh ku soo dhoofsadaan AVI in Lugood, aad u baahan tahay si loogu badalo AVI u Lugood qaabab socon.
Qeybta 1: Hel Best & Professional AVI in ay Lugood Converter
Qeybta 2: AVI Free in Lugood Converter
Qeybta 3: AVI Online in Lugood Converter
Converter video Tani ma aha oo kaliya video weyn diinta qalab, laakiin sidoo kale waxay bixisaa qaar ka mid ah hawlaha video tafatirka qabow sida ku biirtay, jarida, lana siii iwm Haddii aad AVI video clips jira dhowr footages, waxaad iyaga ku biiro karaa dhamaystiran video ah oo si toos ah app this. Waxay leedahay labada versions Mac iyo Windows. Download iyo rakibi version saxda on your computer hore. Markaas raac tilmaan si ay u qabtaan diinta video.
Professional Converter Lugood: Waxa ay taageertaa 150+ qaabab video, oo ay ku jiraan AVI, MKV, MP4, MOV iyo in ka badan.
Tayada sare video saarka: Waxa ay taageertaa sameecadda video diinta, samaynta aad ka heli file wax soo saarka sare ah oo aan laga badinin video tayada asalka ah.
Fast video Converter: The 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta video ka dhigaysa in ay ka sii fiican tahay tartamaya kale.
Great video editor: Edit files AVI aad by falinjeeerka, croppng, isagoo intaa ku daray saamaynta ama watermark.
Power video inay DVD gubi: Waxaa ka gubtay video inay DVD la arrimo menu badan.
Sida loo badalo AVI in Lugood
1. Ku dar files AVI in AVI in ay Converter Lugood
Waxaad saddex siyaabood optional in ay dajiyaan aad files AVI deegaanka si ay barnaamijkan. Haddii files AVI aad waa soo dhow yahay, oo kaliya si toos ah kuwaa oo si app this. Ama waxaad ka dhacay kartaa menu ama guji "Add Files" button in ay leeg- tahay tan app ee ay u dajiyaan files AVI aad kombiyuutar si ay app this. Ogsoonow in app this taageertaa diinta Dufcaddii, sidaas waxaad ku dari kartaa dhowr mar.
Ka dib markii in, dhammaan videos AVI laga keeno ku qoran yihiin Trey ka item bidix ee app this. Si aad u tirtirto video ah, aad u guurto karaa mouse ka badan bar video hawsha ay u muuqdaan badhanka Close ka dibna u riix.
Just ku dhufatey "Qaabka Output" button dhinaca midig ee interface ah, oo ka dibna tag "Apple" category. Halkan, waxaad dooran kartaa in aad model qalab doonayo sidii qaab wax soo saarka. Ogow in dhammaan halkan pre-goobaha filaayo in gebi ahaanba la jaan qaada Lugood.
3. Edit AVI videos (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in aad noola, cut, kala, isku shaandheyn, midowdo AVI videos, waxaad u isticmaali kartaa hawlaha app tafatirka inay sameeyaan shaqooyin tafatirka qaar ka mid ah, oo ay ku jiraan ku daray qabow video saamayn iyo subtitles iwm Si aad u samayn, u tag "Edit" badhanka si ay u doortaan waxa aad rabto in aad sida "jar", "Video Edit" iyo "ku milmaan galay on File" iwm
4. U beddelaan AVI in Lugood
Dhinaca geeska midig ugu hooseysa interface this app ee, riix "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta AVI in an Lugood qaab saaxiibtinimo. Markiiba, aad arki doonaa bar horumarka. Xawaaraha Wareejinta waxaa inta badan ku xiran qaab ciyaareedkiisa kombuyuutarada aad iyo baaxadda faylasha AVI aad.
Ka dib markii ay diinta ka video la dhammeeyo, waxaad dajiyaan karaa files wax soo saarka si ay u Lugood. Orod Lugood, guji "File" menu, doortaan "Add file inay Library" ee doorasho dedeg folder wax soo saarka si ay u dajiyaan faylasha la gediyay.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo AVI in ay Lugood Converter
# 1. Free AVI in Lugood Converter Wondershare Video Converter Free
Sababta talineyso app tani waa sababta oo ah miday. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo videos, xaalkaa videos iyo xitaa donwload online videos. Sidoo kale waxa ay leedahay dad aad u fududahay in la isticmaalo geedi socodka. Just jiidi files si aad u AVI bilaash ah si ay u Converter Lugood berrito dhigay qaab saarka video aad, ka dibna bilowdo si loogu badalo.
Pro: 100% xor ah, si sahlan loo isticmaali
1. Version ayaa lacag la'aan ah ma laha presets si ay u dejiyaan sida qaabab wax soo saarka. Version ayaa Pro of app leeyahay habkaani.
2. The tayada wax soo saarka video iyo xawaaraha shaqeeya oo aan la barbar dhigi karaa iyadoo Video Converter Ultimate.
3. Waxaad uma isticmaali karo shaqo DVD ku gubanayso. Waxaa been version Pro of software ah.
> Resource > Beddelaan > AVI in Lugood Converter: Sida loo soo dejinta AVI in Lugood Library